Sidee ayey u fududahay in Ganacsi Adiga Laguula Sameeyo Onlineka? | Martech Zone
Jimco, Juun 26, 2009 Douglas Karr
Ku dhowaad maalin kasta waxaan ka helayaa xiriidhada alaabada ama adeegyada khadka tooska ah waana igu adag tahay inaan helo waxa aan u baahanahay ama aan u maro halka aan doonayo inaan aado. Waxaa ila yaab leh sida ay adagtahay in shirkadaha qaar u dhisaan mareegtooda. Waxaan kula ganacsan lahaa bogag badan haddii aysan ka dhigin wax aan haba yaraatee suurtagal ahayn!
Kaliya waxaan ka dhigay habka loo maro qaab-foomka badan ee goobta daqiiqado yar ka hor kaliya si aan u ogaado inaan u baahanahay inaan ahaado isticmaale diiwaangashan si aan u isticmaalo barta. Markii aan isdiiwaangaliyay, dhammaan xulashooyinkii hore ee aan sameeyay waan tirtiray. Dib ugama noqonayo! Intii aan ka hadli lahaa dhammaan boggaga xun, waxaan taaban doonaa mid ka mid ah taas sameeyey si fiican u shaqee halkii!
Shalay waxaan la xanuunsanayay madax xanuun dhanjaf ah. Caadi ahaan waan walaacsanahay dhawaanahan - Waxaan xirayaa ballanqaadyo badan noloshayda / wareegga shaqadayduna waxay noqotay mid aad u weyn. Sidoo kale si sax ah uma cunayo oo waxaan ku tuurayaa xoogaa rodol ah oo aan loo baahnayn. Labo saaxiibbo ah ayaa isoo gaadhay waxayna igu yiraahdeen malaha waa waqtigii wax laga qaban lahaa. Ma jecli inaan tago dhakhaatiirta, markaa waxaan raadinayaa waxyaabo kale oo aan ku beddelo.
Daqiiqado gudahood markii aan soo qoro wax ku saabsan madax xanuunka dhanjafkayga ee Twitter, waxaan ka helay qoraalka soo socda Furaha Bogsashada:
Waxaan marayay Furaha Bogsashada goobta, akhri qaar ka mid ah faahfaahinta goobta, oo aad buu ugu farxay inuu jiro Jadwalka internetka (xagga sare ee bog kasta!) Waxaan hubiyey jadwalkayga oo hadda waxaan la leeyahay kulan hordhac ah oo aan la yeelanayo Cheryl subaxnimada Sabtida. Tani waa sida fudud ee bartaadu u noqon laheyd. Ma tahay
Tags: cashuurta iibka internetkamobilenomicswar-saxaafadeed
Jun 26, 2009 at 3: 22 PM
Macaan Waxaan ballantaydii ballanta Ossip's ee Circle dhowr toddobaad ka hor khadka tooska ah. Waxay ahayd wax fudud oo aan xanuun lahayn, umana baahnin inaan dhab ahaantii la hadlo qof. Waxaan ahay dork, sidaa darteed ma jecli inaan daruuri ula hadlo dadka aanan aqoon. 🙂
Jun 26, 2009 at 11: 17 PM
Waxaan qoray dhowr maqaal sidaan oo kale, sida "Sida AAN LOO HELI LAHAYN macaamil: Shan qalad oo suuqgeyn guud ah" Kuma faafin doono faallooyinkaaga halkan xiriiriyeyaasha, laakiin kuma jirto degelkeyga ku qoran liiska (yaa leh hal bog oo keliya?) )